Fandraharahana ara-kolontsaina: mitodika amin’ny tanora ny Tosik’Art - ewa.mg
News - Fandraharahana ara-kolontsaina: mitodika amin’ny tanora ny Tosik’Art
Roa taona lasa izay, nikarakara ny
“Tosik’Art” ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina (MSK).
Naka endrika fifaninanana tetikasa manodidina ny fandraharaharana
eo amin’ny sehatry ny kolontsaina izany, ka nanomezana tohana
ara-bola sy ara-kevitra ireo tetikasa voafidy. Roa taona taty
aoriana kosa, nampisalorana ny Ivontoeram-pikotrehana orinasa
ara-kolontsaina ho an’ireo tanora izy ity.
Nisantatra ny ivontoerana Tosik’Art ny any Toamasina, izay
notokanana ny 29 mey lasa teo. Hanome fiofanana fototra ireo tanora
liana, araka izany ny MSK, ampian’ny eo anivon’ny METFP. Fanamby ny
hanome tanana ireo tanora, miainga hatrany amin’ny famoahana ny
hevitra famoronana hananan’izy ireo, ny fanoratana ny
drafi-pandraharahana (business plan) ka hatrany amin’ny
fanamasahana ny tetikasa ho lasa azo ikarohana famatsiam-bola any
Ankoatra an’i Toamasina, efa nankatoavin’ny Filankevitry ny
minisitra farany teo ny hananganan’ny MSK ny Tosik’Art any amin’ny
renivohi-paritra 9 ( Maevatanana, Antsirabe, Tsiroanomandidy,
Mananjary, Miarinarivo, Ihosy, Sambava, Ambovombe, Taolagnaro) hafa
amin’ity taona 2021 ity.
L’article Fandraharahana ara-kolontsaina: mitodika amin’ny tanora ny Tosik’Art a été récupéré chez Newsmada.
Covid-19 sa aretina hafa ? Misy maty isan’andro any anivon’ny isam-pokontany
Andrenesana fahafatesana matetika tato ho ato teny anivon’ny fiarahamonina. Mila ho isan’andro izany eny anivon’ny fokon­tany. Saika nisoritra fambaran’aretina covid-19 ny ankama­roan’ ireny nodimandry ireny. Ahenoana fahafatesana isan’andro, mila ho isam-pokontany eto An­tananarivo. Efa ho fahazarana ny mihaino ny figadon’ny la­kolosim-piangonana fam­pilazana fahafatesana rehefa misy mpianakavin’ny finoana lavo. Toraka izany ny antso­antso fanao eny anivon’ny fo­kontany mitety elakela-trano mampahafantatra fahafate­sana. Ny peta-drindrina vaovao isan’andro milaza amin’ny mpiray monina ny fahafatesan’ ny mpiray tanàna. Isan’andro koa no ahitana fiara milanja razana andeha handevina. Matetika ny fahi­tana olona maty anaty tambajotran-tserasera, izay tsy azo tsinontsiniavina. Sesilany no ahafantarana ireo karazan’ olona ambony sy malaza nindaosin’ny fahafatesana vokatry ny aretina samihafa tato ho ato. Tsy mifidy fa lavony avokoa na pasitera na miaramila na zandary na dokotera na olon-tsotra… Mahalasa ny saina hoe covid-19 avokoa ve ireny tranga fahafatesana rehetra ireny? Ny ankamaroany, itrangana fa­mantaran’aretina mitovitovy amin’ny covi-19 avokoa. Na­rary an-doha, sempotra, niakatra tosidra, nanavy be, nihareraka ….Mitebiteby sy mihorohoro ny maroAnkoatra ireny ny isan’ny olona matin’ny covi-19, araka ny tatitra avoakan’ny CCO eny Ivato, efa tafakatra 10 ny maty tao anatin’ny iray andro ary 50 mahery ireo efa namoy ny ainy tao anatin’izay efa-bo­lana izay. Tahotra sy horohoro no iainan’ny olona. Tsi­karitra ny ezaka ataon’ny fanjakana, saingy mbola misy ny fitavozavozana miteraka fahasorenana mahazo ny marary eny anivon’ireny toeram-pitsaboana ireny. Maro ireo mijoro vavolombelona amin’izany kanefa mahatsapa ihany koa ny asa mafy iandraiketan’ireny dokotera ireny.Tatiana A L’article Covid-19 sa aretina hafa ? Misy maty isan’andro any anivon’ny isam-pokontany a été récupéré chez Newsmada.
14 oktobra: 62 taona ny Repoblikan’i Madagasikara
14 oktobra 1958-2020. 62 taona no nanambarana ny fijoroan’ny Repoblikan’i Madagasikara, teny amin’ny efitrano filanonan’ny lycée Galliéni, Andohalo. Nanomboka teo, firenena repoblikanina i Madagasikara.Tsy ifandovana ny fitondram-panjakana, olom-boafidy no mitondra nanomboka teo… Talohan’io, nanomboka ny 6 aogositra 1896, zanatany i Madagasikara, resy tamin’ny ady tamin’ny mpanjanatany frantsay, septambra 1895.Foana ny lalàna nahazanatany frantsay, ny 15 oktobra 1958. Nijoro ny Repoblika, niredonana voalohany ny hiram-pirenena “Ry tanindrazanay malala ô”, solon’ny hira talohan’ny 1895 “Arovy ny mpanjaka”. Natsangana voalohany koa ny saim-pirenena ary ny teny filamatry ny Repoblika: Fahafahana-Tanindrazana-Fandrosoana.Tsy mbola azo niverina ny Fahaleovantena Nisy ny fitsapan-kevi-bahoaka natao ny 28 septambra 1958. Fahazoana fahaleovantena miaraka amin’ny Lafintany ivelan’ny ranomasina frantsay ny “Eny”, nandresy tamin’ny vato 77 %; fahazoana ny fahaleovantena tanteraka ny “Tsia”.Tsiahivina fa ny Kongresin’ny Antenimieram-paritany enina no nankatoa ny fijoroan’ny Repoblika, ny 14 oktobra 1958: vato 208 nanaiky, 26 nanohitra, enina ny mpanolotsaim-paritany tsy tonga. Tsy mbola nahaleo tena i Madagasikara tao anatin’ny hoe “lalàna lasitra”, nolaniana ny 23 jona 1956. Fanomanana sy fiomanana amin’ny fizakana ny fahaleovantena ny governemanta najoro tao anatin’ny lalàna lasitra.Nifampiraharahana ny FahaleovantenaNifamparaharaha hahazoana ny Fahaleovantena ny filoha Tsiranana Philibert, voafidin’ny kongresy, ny Antenimierampirena sy ny Antenimierandoholona, ho filohan’ny Repoblika I, ny 1 mey 1959. Lany tamin’ny vato 113 tamin’ny 114 izy, vato maty iray.Nitarika ny delegasiona nifampiraharaha ny amin’ny famindram-pahefana, tany Paris, izy, ny 10 febroary 1960. Vita rangopohy izany, ny 2 avrily, ary natao sonia teny Andafiavaratra, ny 26 jona 1960, nambara teny amin’ny vatomasina, Mahamasina, ny fiverenan’i Fahaleovantenan’i Madagasikara.R.Nd.L’article 14 oktobra: 62 taona ny Repoblikan’i Madagasikara a été récupéré chez Newsmada.
Fanatsarana ny fitaterana eto an-dRenivohitra: taxi-be miisa 600 efa nahazo “puce” nametrahana GPS
Mitohy hatrany ny fanatsarana ny fitaterana sy ny ezaka ho amin’ny fijerena ny fizoran’ny fifamoivoizana eto Antananarivo Renivohitra. Fantatra izao fa miisa 600 ireo “puce” ho an’ny GPS natao ho an’ny taxi-be. Tanjona ny hanatrarana hatrany amin’ny taxi-be miisa 3 000. Tahaka izany koa ny taxi, miisa 3700 ireo efa nahazo « licence » nomerika.Etsy an-daniny, afaka mahita sy mampiasa ny fizoran’ny fifamoivoizana mivantana avokoa ny rehetra amin’ny alalan’ity rohy ity : https://traffic.tag-ip.com/… Vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny Tag IP izany. Manome ny vaovaon’ny fizoran’ny ny fifamoivoizana isan’andro koa ny onjam-peo Iarivo FM 95.6.Isika rehetra miara-mientana hatrany no hamerina ny hasin’Antananarivo, Tanànantsika.Hahazo fotodrafitrasa ny eny ifotonyAnkoatra izany, anisan’ny misitraka ny fotodrafitrasa miainga avy amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ny eny anivon’ny boriborintany fahenina. Mpanatanteraka izany ny eo anivon’ny sampandraharaha misahana ny asa vaventy eo anivon’ny CUA. Miompana amin’ny fanamboarana lalamby sy ny tetezana kely izany tetikasa izany. Eo koa ny fanamboarana ny fantsona hanatsarana ny fiainan’ny mponina amin’ny andavanandrony. Tsy hijanona eo anefa izany fa hiitatra any anivon’ireo boriborintany enina, araka ny nambaran’ny eo anivon’ny fiadidiana ny Tanànan’Antananarivo. “Hamerina amin’ny laoniny ny hasin’ny Tanànantsika isika rehetra”, hoy ny ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina. Tafiditra amin’ny fanatsarana ny Tanàna sy ny fijerena ny fiainan’ny mponina izany.Synèse R. L’article Fanatsarana ny fitaterana eto an-dRenivohitra: taxi-be miisa 600 efa nahazo “puce” nametrahana GPS a été récupéré chez Newsmada.
Trano nirodana teny Anosizato Atsinanana: nitohy ny fikarohana ilay lehilahy iray tototry ny béton
Mbola nitohy, hatramin’ny omaly, ny fikarohana ilay mpiasa iray tototra noho ny fianjeran’ny trano lehibe iray misy rihana eny Anosizato Atsinanana I. Nanano sarotra ny fikarohana ity lehilahy ity na dia efa lany haika ihany aza ireo mpiara-miasa aminy…Raha ny fanazavana voaray avy amin’ny lefitry ny fokontanin’Anosizato Atsinanana I, nianjera tampoka avy eny ambonin’ilay trano vao amboarina ity mpiasa ity ka tototra tao anaty korontam-biriky sy béton. Efa natao ny fanamarinana rehetra ireo mpiasa niasa tao amin’ilay trano dia voamarina tamin’izany fa tsy hita izay nanjavonany. Natao ihany koa ny fanisana ireo mpiasa niasa tao amin’ilay trano ary hita fa tsy tao izy. “Nisy rahalahiny nandeha teny amin’ny hopitaly nijery sao dia amin’ireo sivy naratra izy, saingy tsy hita tao amin’ny hopitaly”, araka ny fanazavan’ny eo anivon’ny fokontany hatrany. Manoloana izany, niantso ny eo anivon’ny sampana mpamonjy voina indray ny fokontany mba hanohizana ny fikarohana. Niantso tolo-tanana tamin’ny orinasa Colas koa izy ireo mba hifanampy amin’ny mpamonjy voina noho ny tsy fahampian’ny fitaovana satria béton be no nianjera. Voamarina, araka izany, fa niasa tao ity mpiasa ity, saingy tsy mbola hita izy hatramin’ny omaly (fotoana farany nanoratana) ary nanao izay ho afany ireo mpamonjy voina tamin’ny fikarohana azy. Tonga teny an-toerana hijery ity havany tsy hita ity kosa ny fianakaviany, saingy voasakatsakana.Trano efatra indray rava nianjeran’ilay trano lehibe…Nandray fepetra amin’ireo trano manodidina ihany koa ny eo anivon’ny fokontany satria tsy manara-penitra ny fanorenana ity trano nianjera ity. Vokatr’izany, trano efatra no indray rava nianjeran’ity trano lehibe ity. Olona manodidina ny 200 eo ho eo no indray voakasik’izao faharavana trano izao. Tsiahivina fa tranona teratany vahiny ity nianjera, afakomaly, ity ary mampitaraina ny olona mihitsy ny fanamboarana izany satria tsy manaraka ny fenitra takin’ny asa fanorenan-trano. Efa misy mipetraka ao ambany rihana, saingy mbola mandeha ihany ny fanorenana ny fampiakarana ny rihan’ilay trano. Ahina ho misy ifandraisany amin’ny fiavian’ny orana sy izao fanamboarana tsy manara-dalàna izao ity firodanana tampoka ity. Nanome baiko amin’ny handrodanana ny ampahany amin’ilay trano ahina hianjera ny teo anivon’ny BNGRC. Lasa nitsoaka kosa ilay teratany vahiny tompon’ity trano ity.J.CL’article Trano nirodana teny Anosizato Atsinanana: nitohy ny fikarohana ilay lehilahy iray tototry ny béton a été récupéré chez Newsmada.